UCP2 Setscrew အမျိုးအစား
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF204F 20 47 31 81 63 0.6 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်အပြန်အလှန် 10000 rev Warranty 2000 rev ။ grading Z3V2 Accessory grade အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ် lnner လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF205F 25 52 34.1 94.6 70 0.79 မိနစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် Revolution 10000 rev Rev. အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) Block (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF206F 30 62 38 108.5 83.4 1.23 မိနစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် Revolution 10000 rev Rev. အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) Block (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်ဘက်လက်စွပ် lnner လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF207F 35 72 43 117 92 1.55 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်အပြန်အလှန် 10000 rev Warranty 2000 rev ။ grading Z3V2 Accessory grade အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) Block (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်ဘက်လက်စွပ် lnner လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF208F 40 80 49.1 130 102 1.87 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်သို့ပြောင်းလဲမှု 10000 rev Rev. တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားသော Z3V2 ဆက်စပ်မှု 2000 rev ။ အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ် lnner လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF209F 45 85 49.1 136.3 104 2.17 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်အပြန်အလှန် 8000 rev အာမခံ - 1600 Rev rev grading Z3V2 ဆက်စပ်ပစ္စည်းတန်း အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF210F 50 90 51.6 143 111 2.7 မိနစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် Revolution 8000 rev Warranty 1600 Rev grading Z3V2 Accessory grade အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF211F 55 100 55.5 162 130 3.31 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်အပြန်အလှန် 8000 rev အာမခံ - 1600 rev Rev grading Z3V2 ဆက်စပ်ပစ္စည်းတန်း အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF212F 60 110 65.1 175 142 4.9 တစ်မိနစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတွက်အလှည့်အပြောင်း 8000 rev အာမခံ - 1500 Rev grading Z3V2 ဆက်စပ်ပစ္စည်းတန်း အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) Block (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်ဘက်လက်စွပ် lnner လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF213F 65 120 65.1 186 149 5.66 မိနစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် Revolution 7000 rev Warranty 1500 Rev ။ grading Z3V2 Accessory grade အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ
UC BEARING အရွယ်အစား (mm) BLOCK (housing) အရွယ်အစား (mm) MODEL lnner ring အပြင်လက်စွပ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်အမြင့်အကျယ်အရှည်အပေါက်အကွာအဝေးအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် UCF215F 75 130 77.8 199 159 6.78 မိနစ်ကန့်သတ်ချက်အတွက်တစ်လှည့်အပြန် 7000 rev Warranty 1300 rev grading Z3V2 Accessory grade အမဲဆီ LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 ပစ္စည်း Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ် F အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံ